सेन्ट एक्सपेडिटो «प्रार्थना» 【rge तत्काल कारणहरूको संरक्षक】
सेन्ट एक्स्पेडो, अत्यावश्यक समस्याहरूको संरक्षक
La leyenda cuenta que peseaser un soldado romano, acérrimo defensor del Imperio, cierto día el corazón de San Expedito fue tocado por la भगवानको अनुग्रह, convirtiéndose al क्रिश्चियन.
लाग्छ कि उनको परिवर्तनको लगत्तैै भूतले उहाँलाई भाँडाको रूपमा देखा पर्‍यो उसको विचलित गर्ने मनसायले र चिच्याएर "Cras, cras, cras", ल्याटिनमा जसको अर्थ "भोली, भोलि, भोली" हो।
न त छोटो वा अल्छी, प्रश्नमा रहेका संतले ऊर्जाको साथ प्रतिक्रिया गर्नुभयो र कागलाई बारम्बार कुल्चनुभयो "Hodie, hodie, hodie", जसको ल्याटिनमा अर्थ छ "आज आज आज". "म भोलीको लागि केहि छोड्ने छैन, आजदेखि म एक इसाई हुनेछु ", उहाँले snapped। यस्तो दृढ अभिव्यक्तिले उसलाई संतको पदवी प्राप्त गरेको छ जुन तत्काल कठिनाइहरूमा सम्मिलित हुन्छ।
1 सबैभन्दा प्रेसिंग आवश्यकताहरू पूरा गर्ने संत को हो?
2 के संत जसको नामको अर्थ "द्रुत" साँच्चै अवस्थित थियो?
3 रोमन सैन्य सेना "फुलमिन्टे" को सिपाही वरपर सृष्टि गरिएको कहानी।
4 स्यान एक्स्पेडिटोको नाम के हो
5 कसरी एक संत रोमन सैन्य प्रतिनिधित्व थियो
6 युवा रोजगारदातालाई कसरी सोध्ने
6.1 न्याय र तत्काल कारणहरूको लागि सेन्ट एक्स्पेडोलाई प्रार्थना गर्नुहोस्
6.2 सेन्ट एक्स्पेडोलाई प्रार्थनाको साथ भिडियो:
सबैभन्दा प्रेसिंग आवश्यकताहरू पूरा गर्ने संत को हो?
यो सन्त एक रोमी सैन्य मानिस हुन सक्थे जो चौथो शताब्दीको सुरुमा सम्राट् डियोक्लेटियनको समयमा रोमी सेनाको कमाण्डरको पदभारमा थिए।
केही स्रोतहरूले उनलाई सेन्ट फिलोमेनाको समकालीन भनेर चिनाए र पुष्टि गरे कि उनको शहीद अप्रिल १,, 19०303 मा भएको थियो। उहाँ क्याथोलिक विश्वासीहरूले मान्यता प्राप्त संत हुनहुन्छ, उनी क्याथोलिक धर्मशास्त्रमा देखा पर्दैन।
क्यानोलाइजेशनको उनको कार्यको लागि, यो क्याथोलिक चर्च द्वारा समीक्षा गरिएको छैन र यद्यपि अप्रिल १ is हो जब सान एस्पेडिटो मनाईन्छसत्य यो हो कि यो पार्टी व्यापक प्रचारित छैन।
के संत जसको नामको अर्थ "द्रुत" साँच्चै अवस्थित थियो?
यो आश्चर्यजनक हुन सक्छ यस संतको अस्तित्व अझै प्रश्न गरीन्छ। भक्ति को उत्पत्ति १ 1781१ को हो जब अज्ञात अवशेषहरू सहितको बक्स पेरिसियन कन्भेन्टमा प्राप्त भयो।
यी अवशेष वर्गको catacombs देखि फेला पार्न सकिन्छ डेन्फर्ट - रोचेरो। तथ्य यो छ कि प्रेषक, उही शहरका हुन्, बक्समा शब्द लेख्यो "Spedito" (जसले "एक्स्प्रेस मेल" मा अनुवाद गर्दछ), उनीहरूको ढुवानीमा द्रुत गति लिने उद्देश्यले ननहरूले सोचे कि यो अवशेषहरू "स्यान स्पिडिटो" भन्ने कसैको हो।
यद्यपि उनी रोमन शहीदविज्ञान एक अज्ञात शहीदको नाम राखे जसको नाम एक्सपेडिटस हो, र जसको घोषणा एक्स्पेडी हो, ननहरूले मानिलिए कि उनीहरू शहीदको अवशेष भन्दा अघि थिए जुन त्यस्तो सम्बन्धमा देखा पर्‍यो। त्यस क्षणदेखि, तिनीहरूले उनको बिन्तीको लागि प्रार्थना गरे। जब उनका प्रार्थनाहरूको जवाफ तुरुन्तै दिइयो, फ्रान्सेली मुलुकभरि पवित्र व्यक्तित्वको पूजा गर्न थालियो।
यो प्रमाणीकरण दिनको लागि चौथो शताब्दीको अनुरूप मिति प्रदान गर्नु भन्दा धेरै समय लागेन। यो मानिन्छ "असम्भव कारणहरूको वकिल" एक शीर्षक जुन उसले सान्ता रीटासँग साझेदारी गर्दछ सेन्ट जुड थडियस.
रोमन सैन्य सेना "फुलमिन्टे" को सिपाही वरपर सृष्टि गरिएको कहानी।
सत्य यो हो कि १ the औं शताब्दीको अन्तदेखि र सायद पहिले पनि, यस रहस्यमय संतको बारेमा एउटा कथा उत्पन्न भएको थियो।
यो कुरा के हो भने, उनी XII रोमन फौजका कमाण्डर हुने थिए, जसको उपनाम "फुल्मिन्ते" थियो, उनले अभिनय गरेका सैनिक कारनामहरू दिए। यो तेस्रो शताब्दीको अन्तमा मेल्टिने (क्यापडोसिया) जिल्लामा आधारित थियो जुन अहिले मालाट्या (टर्की) हो, रोमन प्रान्तको आर्मेनियाको एक सीट हो।
यो फौज मुख्यतया इसाई सिपाहीहरूले बनेको थियो, जसको मुख्य लक्ष्य रोमीहरूले हनको आक्रमणको बिरूद्ध आक्रमण गरेका क्षेत्रहरूको पूर्वी सीमानाको रक्षा थियो।
आफ्नो रूपान्तरण भन्दा पहिले एक्स्पेडोको जीवन समाप्त भयो। यसको पछि, उनले सम्पूर्ण सेनालाई प्रचार गरे र उनीहरूलाई इसाईमतको नजीक ल्याए। यस परिस्थितिले सम्राट डियोक्लेटियनको क्रोध जगाएको हुनुपर्छ किनकि उनको ओहदाको महत्त्वले उनलाई राष्ट्रपतिको टाउकोमा राख्यो। यस्तो विश्वास गरिन्छ कि उनलाई कोर्रा लगाइन्थ्यो र पछि तरवारले उनको टाउको काट्न सकिन्छ।
स्यान एक्स्पेडिटोको नाम के हो
यो एक नाम हो कि सैन्य अर्थ छ। स्पेनिशमा, एक्सपेडिटो एक विशेषण हो जुन ल्याटिन अभियानबाट आएको हो सबै अवरोधहरूबाट स्वतन्त्र हुनुहोस् र कार्य गर्न तयार हुनुहोस्।
प्राचीन रोममा यो भनिएको थियो कि सैनिकहरूले हतियार र भारविना मात्र उनीहरूले अभियान वा अभियानमा भाग लिए। यसको विपरित, उनीहरूले बाधा अवरुद्ध गरे जब तिनीहरूले उनीहरूको प्रतिबन्ध लगाउँथे, यो अवधारणा जसमा निद्रा झोला, खाने भाँडा, जुत्ता उपकरण, व्यक्तिगत प्रभाव, प्रावधान र उपकरणहरू समावेश थिए।
Expediti शब्द यो फर्मियन को गठन गर्न को लागी पनि प्रयोग भयो कि यसले एक हल्का पैदल सेनाको रुपमा संचालन गर्न को लागी, यसको आन्दोलनहरु लाई ठूलो गति संग सम्पन्न। हुनसक्छ यो स्थान हो जहाँ सान एक्सपेडिटो आएको हो, वा सन्तले आफ्नो सैन्य जीवनको सुरुवात इकाईमा गरेका थिए जसले यिनै प्यारामिटरहरू अनुसरण गरेका थिए जसबाट उनले आफ्नो नाम प्राप्त गरेका थिए।
कसरी एक संत रोमन सैन्य प्रतिनिधित्व थियो
यस सन्तका छविहरूले उनको रोमन सैन्य पोशाकमा प्रस्तुत गर्दछन्, छोटो ट्यूनिकमा लुगा लगाएर र काँधबाट पछाडि फ्याँकिएको वस्त्रसहितको अनुसार। समय को सैन्य फैशन।
उसको पोष्ट मार्शल छ। उसको एउटा हातमा उनले तामको पातलाई शहीदको प्रतीकको रूपमा र अर्कोमा क्रसले शव्द प्रदर्शन गर्दछ "Hodie", "आज" ल्याटिनमा, माथि उल्लिखित कथालाई श्रद्धांजलिको रूपमा। तपाईंको बायाँ खुट्टाको साथ काँकमा जो कराइरहेको छ "Cras", "भोलि" ल्याटिनमा।
युवा रोजगारदातालाई कसरी सोध्ने
यद्यपि सान एस्पेडिटो सबैभन्दा जरुरी आवश्यकताहरूको समाधानका लागि उसको असाधारण उपहारका लागि विश्वव्यापी रूपमा चिनिन्छ, उहाँ युवा व्यक्तिको संरक्षक, प्रक्रिया र परीक्षणमा मध्यस्थ, विद्यार्थीहरूको लागि सहयोग, परिवारको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य प्रक्रियामा बिरामी र संरक्षक हुनुहुन्छ। व्यापार, यस बाहेक अन्य केसमा आमन्त्रित हुन सक्षम हुनुको साथै।
न्याय र तत्काल कारणहरूको लागि सेन्ट एक्स्पेडोलाई प्रार्थना गर्नुहोस्
“मेरा सेंट एस्पेडिटोले न्यायसंगत र तत्काल कारणहरूको लागि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग मेरो पक्षमा बिन्ती गर्दछन्, ताकि दु: ख र निराशाको घडीमा उहाँ मेरो सहायता गर्न आउनुहुनेछ।
मेरो सेन्ट एक्स्पेडो तपाई जो पवित्र योद्धा हुनुहुन्छ।
तपाईं जो पीडितहरूका संत हुनुहुन्छ, तपाईं जो बेकम्मा व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो तपाईं जरुरी कारणहरूका लागि सन्त हुनुहुन्छ, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई प्रदान गर्नुहोस्: सामर्थ्य, साहस र निर्ममता।
मेरो अर्डरको ख्याल राख्नुहोस्! (अर्डर गर्न)।
मेरो सान एक्स्पेडो, मलाई यी गाह्रो घण्टाहरूलाई जित्न मद्दत गर्नुहोस्।
मलाई हानि गर्ने सबैबाट मलाई बचाउनुहोस्, मेरो परिवारको सुरक्षा गर्नुहोस्।
मेरो अनुरोधको तुरुन्त ध्यान दिनुहोस्।
मलाई शान्ति र शान्ति फिर्ता दिनुहोस्।
My San Expedito! म आफ्नो बाँकी जीवन को लागि आभारी हुनेछु र विश्वास गर्ने सबैलाई तपाईंको नाम फैलाउनेछु।
सेन्ट एक्स्पेडोलाई प्रार्थनाको साथ भिडियो:
सेन्ट एम्ब्रोज, कूटनीति उनको उपहार हुन्
सेन्ट जेरोम स्ट्रिडन, अनुवादकहरूको संरक्षक